Running Squid Proxy Server on Linux - Page2- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Running Squid Proxy Server on Linux
ပြန်စာ - Running Squid Proxy Server on Linux
ကို asulike88 ခင်ဗျာ..ကျနော်လဲ သိထားတဲ့ command လေးတွေ ပြောပါရစေ။
Ubuntu မှာဆိုရင် ရှာမတွေ့ဖြစ်နေတဲ့ အထက်ပါ စာကြောင်းလေးက ကျနော်အပြာရောင်စာကြောင်းတွေနဲ့ ပေးထားတဲ့ နေရာလေးမှာရှိပါတယ်။
# cache_peer 10.50.0.23 parent 3128 3130 login=131036:92F7bVfh no-query
Fedora မှာဆိုရင် ရှာမတွေ့ဖြစ်နေတဲ့ အထက်ပါ စာကြောင်းလေးက ကျနော်အညိုရောင်စာကြောင်းတွေနဲ့ ပေးထားတဲ့ နေရာလေးမှာရှိပါတယ်။
#	NOTE: THIS PARAMETER DOES NOT SPECIFY THE MAXIMUM PROCESS SIZE.
မတွေ့ရင်လဲ ထည့်ရေးပေးလို့ရပါတယ်။ Squid က internet cache အတွက် အဓိက သုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခြားမလိုလားအပ်တဲ့ ကျနော်တို့ root - Web directory ထဲတွင် sub-directory (folder) အဖြစ်ရှိနေတဲ့ ဖိုင် ၊ ဖိုဒါများကို cache အနေနဲ့ မသိမ်းချင်လို့ အထက်ပါ စားကြောင်း ၂ ကြောင်းကိုရေးရချင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ Squid Serivce တွေကို Start or Restart or Stop ပေးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့
Fedora မှာဆိုရင် ( service squid start or restart or stop)
Redhat မှာဆိုရင် (/sbin/service squid start or restart or stop)
Ubuntu 9.04 မှာဆိုရင် (sudo /etc/init.d/squid start or restart or stop)
Ubuntu 10.04 နဲ့အထက်မှာဆိုရင် (sudo service squid start or restart or stop)
ပြီးတော့ Squid မ Run ခင် cache folder တည်ဆောက်ဖို့အတွက်
Ubuntu မှာဆိုရင် ( sudo squid -z)
Redhat မှာဆိုရင် ( /usr/sbin/squid -z) ဆိုပြီးဖြစ်ကြပါတယ်။
ပြီးတော့ ကိုasulike88 မေးထားတဲ့ အောက်ပါ စာကြောင်းကို ကျနော်မရှင်းလို့ပါ
အင်တာနက်တော့သုံးလို့ရနေတယ်ခင်ဗျ..Squid ထိုင်ထားတဲ့ စက် IP နဲ့သုံးလို့ရတယ်..တစ်ခြား Proxy တွေလဲသုံးလို့ရအောင်
alway_direct allow all
ဒီနှစ်ကြောင်းပြင်လိုက်တာ မရဘူးဖြစ်နေတယ်..Squid server ip နဲ့ပဲရတယ်
အဲဒါလေးကို ပြန်ရှင်းပေးပါဦး Squid ထိုင်ထားတဲ့ IP နဲ့ပဲ အခြားစက်တွေရဲ့ Browser ရဲ့ network Setting မှာ iP ထည့်ပြီး သုံးလို့ နက်ရတာကို ဆိုလိုတာလား? ကိုasulike88 အခု Squid run ထားတဲ့ စက်တစ်လုံးမှာပဲ အင်တာနက်ကရနေတာလား ကျနော်လဲ မရှင်းလို့ပါ နားမလည်လို့ပါ ခင်ဗျာ။ တခြား Proxy တွေလဲ သုံးလို့ ရအောင် လို့ မေးထားလို့ပါ။
ကျနော်နားလည်ထားတာကတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ စမ်းကြည့်ဖူးပါတယ်။ ip address တွေနဲ့ အခြားစက်တွေကို သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုasulike88 အနေနဲ့ squid.conf ထဲမှ Restricting Web Access By IP Address ဆိုတဲ့ Option အောက်မှာ ဥပမာ။
acl LAN src 192.168.0.2/24
ဆိုပြီးပေးကြည့်ပြီး သုံးကြည့်ပါလားခင်ဗျာ...ကျနော်နားလည်ထားတာ တစ်မျိုး ကိုasulike88 လိုချင်တာ တစ်မျိုးလဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ နားလည်တဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေလဲ ဖြည့်စွက်ပေးပါလိမ့်မယ်။
Last edited by မိုးလွင်; 07-01-2011 at 11:34 PM.. Reason: ဖြည့်စွက်
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ မိုးလွင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဦး, မျိုးဟန်ထက်, asulike88, bonge, hellboy, ko myo, kyaukphyu, minthike, sAnDViper, yelinoo, zo
အကိုတို့ရေ ထပ်ပြီး transparent squid proxy အကြောင်းလေးများ ထပ်ရေးပေးပါဦး
ဖြစ်နိုင်ရင် step by step လေးသိချင်လို့ပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ thetkokosan အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by thetkokosan
ကျွန်တော်ကိုလည်း transparent squid proxy အကြောင်းလေးကို အကျယ်တ၀င့် ရှင်းပြပေးပါအုံးခင်ဗျာ။
squid proxy server ကိုတော့ အကိုပြောတဲ့အတိုင်း စမ်းပြီးလုပ်ကြည့်တာ ရပါတယ်။ proxy server ခံသုံးရင်တော့ ရပါတယ်။ no proxy လုပ်ရင် မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ transparent လုပ်မှ ရမယ်လို့တော့ ကြားဖူးတယ်။ အဲဒါ မလုပ်တတ်ဘူးဖြစ်နေတယ် အကိုရေ အချိန်ရရင် ပြန်ပြီးရေးပေးပါအုံးခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ thetkokosan အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဖန်ဆင်းရှင်, g00gle, minthike, yelinoo, zo
21-09-2011, 10:06 AM
transparent proxy လုပ်ရန်အတွက် routing process လိုပါတယ်။
အင်တာနက်အ၀င်မှလာသော မည့်သည့် port ကိုမဆို squid နားထောင်နေသော port အား forward လုပ်ပေးနိုင်ရင် transparent ဖြစ်ပါတယ်။
အဲသည်အတွက် iptables အကြောင်း သိထားရန် အကြမ်းဖျင်းလိုအပ်ပါတယ်။
အောက်ပါကွန်မန်းဟာ transparent proxy အတွက် port forward လုပ်ပေးနိုင်သော ကွန်မန်းဖြစ်ပါတယ်။
#iptables -A PREROUTING -t nat -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --t0-port 3128
သည်နေရာမှာ eth1 သည် local NIC card ဖြစ်ပြီး eth0 သည် internet wan card ဖြစ်ပါသည်။
3128 နေရာမှာတော့ မိမိ squid run ထားသော port နံပါတ် ဖြစ်ရပါမယ်။
Last edited by phoelapyaee; 21-09-2011 at 10:38 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ phoelapyaee အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မျိုးဟန်ထက်, bagothar85, bonge, g00gle, minthike, putty, thetkokosan, tu tu, yelinoo, zo
27-11-2011, 03:00 PM
300 kbs ကို Local မှာ ရှိတဲ့ စက် ၈ လုံးကို ၁ လုံးမှာ 15 kbs နှန်းနဲ့ဘဲ
Brindwith လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် Squid.conf မှာ ဘယ်လိုရေးပေးရမှာလဲ အကို...
ကျနော် အကို ရေးထားတဲ့ Brindwith သတ်မှတ်တာကို အသေခြာနားမလည်ဘူး
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ မင်းနိင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by မင်းနိင်
28-11-2011, 08:25 AM
ဒီလင့် ကပို့စ်မှာတော့ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
အဓိက client စက်များအတွက် သီးသန့်ပေးချင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် delay_class2ကို ဥပမာ အသုံးပြုပါမယ်။
အကိုက 300 kbs က network တစ်ခုလုံးအတွက်ရယ်၊ တစ်ဦးချင်းစီကို 15 kbs ပေးချင်တာဆိုတော့ ...
acl LAN src 192.168.1.0/24                          # The acl defined for the Network
delay_pools 1                                             # Number of Pool
delay_class 12                                          # Defines the class of pool for the Pool Number 1
delay_parametes 1 307200/307200 15360/15360  #6250 means 6250 bytes ..All units are defined bytes.
delay_access 1 allow LAN                             # This is the access tag which tie to the acl bw_users
အဲဒါလေးကို squid.conf မှာ ကူးပြီး စမ်းကြည့်ပါဦး။
acl LAN src 192.168.1.0/24 နေရာမှာတော့ မိမိ LAN network ဖြစ်မှာပေါ့။
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ phoelapyaee အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မင်းနိင်, မျိုးဟန်ထက်, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), bagothar85, g00gle, minthike, yelinoo
26-05-2012, 10:16 AM
ိကိုဖိုးလပြည့် ခင်ဗျာ။ ။
ကိုဖိုးလပြည့်ပြောတဲ့အတိုင်း transparent squid ကို လုပ်တာရတော့ရတယ်။ဒါပေမယ့် reboot ချလိုက်ရင် ပြန်ပြန်ပြီး ရိုက်နေရတယ်။ reboot တက်ပြီးတိုင်း transparent ဖြစ်နေချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါသလဲခင်ဗျာ။ အရင် Post ကို ပြန်ဖြေပေးထားတာလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လေးစားစွာဖြင့်.........
Fedora 13 မှာ Squid ကိုဘယ်လိုRun ၇မယ် Conifgure ဘယ်လ်ိုလုပ်ရမယ်နောက်ပြီ Transparent ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် website တွေကိုဘယ်လိုဘန်းရမယ်ဆိုတာလေးရှင်းပြစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ mohonaungchit အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Fedora ဖြစ်ဖြစ်၊ Ubuntu ဖြစ်ဖြစ် Squid Configure လုပ်တာက နည်းက တူတူပါပဲ။
Directory လေး အနည်းငယ်လောက်ပဲ ကွာတာပါ။
တစ်ခါတလေ ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပေးမှ အဆင်ပြေတာမျိုးရှိတော့ ကျွန်တော်ဒီကနေ ပြောရတာ ခက်ပါတယ်။
လုပ်နည်းကတော့ အားလုံးတူတူပါပဲ။ ပြန်စမ်းကြည့်ုလိုက်ပါဦး။ မရရင် Google မှာ လိုက်ရှာကြည့်ုလိုက်ပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ phoelapyaee အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
g00gle, tu tu, yelinoo
load balancing နဲ့ failover ကို squid နဲ့ configure လုပ်လို့ရနိုင်ပါသလားခင်ဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ Zeiya အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Originally Posted by phoelapyaee
အကို WAN က နှစ်လိုင်းဖြစ်နေရင်ကော iptable မှာဘယ်လို configure လုပ်ရမလဲခင်ဗျာ။
18-11-2012, 09:25 AM
ကျွန်တော် Fedora 13 နဲ့squid server ထိုင်ထားပါတယ် ။ အဆင်ပြေပါတယ် server ရော Client တွေပါ
internet access ရပါတယ် ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပြဿနာက server ကိုပါဝါဖွင့် OS တက်လာပြီး login နေရာကို
ရောက်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ login နေရာမှာ login ၀င်ပေးလိုက်မှ Client တွေ internet access ရကြပါတယ် ။
server ကို login မ၀င်ရင် internet access မရဘူးခင်ဗျာ ။ သူများ server တွေတွေ့ ဖူးပါတယ် ။
သူတို့ ဟာကျတော့ server ပါဝါဖွင့်တာနဲ့Clinet တွေ internet access တန်းပြီးရကြတယ်ဗျ
login ၀င်ပေးစရာမလိုဘူး ။ ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်ချင်တယ်ဗျာ ကူညီပါအုံး ။ ကျွန်တော့်လိုင်းက Fiber (username password)
နဲ့ သုံးရတဲ့ Fiber လိုင်းပါ ။ username passowrd ကို DSL connection မှာထည့်သုံးထားပါတယ် ။
ဆိုတဲ့နေရာမှာ 10.50.0.23 ဆိုတဲ့ host IP ကိုကျွန်တော်မရှင်းဘူးဗျ ကျွန်တော့် Fiber က username password ပဲရှိတယ်ဗျ
Fiber ချပေးတဲ့လူတွေကိုမေးကြည့်တော့လဲ သူတို့ လဲမသိဘူးတဲ့ ....
Last edited by ထက်လွင်ဦး; 18-11-2012 at 09:40 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ထက်လွင်ဦး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တည်နေရာ: ! ind3x.php !
ပို့စ်4ခုအတွက် 13 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဆိုပီးတော့ ပေါ နေတယ်ဗျ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးနော်
Nick Name : Kîddø Môñštär
Account Add : kiddomonstar@gmail.com
Website Add : www.kiddomonstar.com
Ubuntu My Notes
!~! The Quieter You Become , The More You are able to hear !~!
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ Kîddø Môñštär အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Kîddø Môñštär ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Visit Kîddø Môñštär's homepage!
Find More Posts by Kîddø Môñštär
15-01-2013, 03:36 AM
Terminal ထဲမှာ sudo cp /etc/squid/squid.conf /etc/squid/orignal.squid.conf ကိုကူးထည့်လိုက်တာ အောက်က Error
cp: cannot stat `/etc/squid/squid.conf': No such file or directory ကြီးပေါ်လာတယ်ဗျာ သုံးတဲ့ Os = Ubuntu 12.1 ပါ ဘာလို့မသိဘူးနော် .... အကြံပေးပါအုံဗျာ :( Connection မကောင်းလို့ ကောင်းအောင်သုံးကြည့်ချင်လို့ပါ .... နောက်တော့ Ubuntu သုံးတာလဲ တပါတ်တောင်မပြည့်သေးတော့ဘာမှ မသိသေးလို့ပါဗျာ ...
16-01-2013, 06:54 AM
ဖိုင် မရှိဘူး ဆိုတာ ပြတာပါ။ ဖိုင် name လွဲနေလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
squid ရှိလား ကြည့်ကြည့်ပါ။ squid3 ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နေပါမယ်။ /etc/squid3/ နဲ့ လိုအပ်ရင် အစားထိုးပါ။
phoelapyaee, tu tu
squid proxy, ubuntu howto, ubuntu knowledge
ကိုယ်ပိုင် web proxy တစ်ခုဖန်တီးခြင်း phoelapyaee ဆွေးနွေးချက်များ722-08-2011 05:50 PM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 11:55 AM